Wow, amagumbi amabini eChic King-Hamba uye eDT/Ithiyetha
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguJanelle
Yiva yonke into enokunikelwa yiStratford kolu hlaziyo lwebhedi ezimbini, iibhafu ezi-2 zokurenta ikhaya. Njengeendawo zokuhlala ezazifudula zizicaka, eli khaya likhethekileyo yayiyeyokuqala ukwakhiwa kwicala elingasentla lomlambo eStratford. Ngokulala i-6 kunye nendawo yangaphandle enefenitshala, kunye nendawo ephambili kumgama wokuhamba wethiyetha yedolophu, akukho ndawo ingcono yokuchitha indawo yakho yokubalekela e-Ontario ke le ndawo inomtsalane!
Igumbi lokulala eli-1: Ibhedi enkulu, igumbi lokuhlambela eline-ensuite
I-Master Bedroom 2: Ibhedi enkulu, igumbi lokuhlambela eline-ensuite
Igumbi lokuhlala: I-Queen sleeper sofa
Ibuyiselwe ngothando ngezinto zale mihla ngelixa igcina isibheno sayo sakudala, le ndawo yokuhlala ibhaliswe ngokwembali ibonelela ngabo bonke ubutofotofo bekhaya! Igumbi lokuhlala elikhanyiswe ngokwemvelo liyakwamkela ngezandla ezivulekileyo, apho unokuchitha khona iimvakwemini ezolileyo ufunda iincwadi, udlala imidlalo yebhodi, okanye ubukele iNetflix nosapho.
Uqinisekile ukuba uyalithanda ikhitshi elihlaziyiweyo elinefriji encinci, i-2-burner cooktop, i-microwave, i-oveni ye-toaster kunye ne-dishwasher. Iintlobo ngeentlobo zekofu, iti kunye nekhrimu ziyakulinda ukufika kwakho.
Yiyonwabele indalo yompheki wakho kwitafile yabantu aba-4 e rustic, okanye thatha indawo yakho yokutyela eyi-fresco uyise kwipatio yangaphandle ene-BBQ.
Njengoko uphumla, zithuthuzele kwenye yee-master suites ezi-2, zombini ezineebhedi ezitofotofo zenkosi, i-55-intshi ye-flat-screen TV ene-Netflix, kunye ne-en-suite yokuhlambela eneshawa yokuhamba. Ikhaya likwabonelela ngezinto zokulala ezitofotofo ezinokuthi zisetyenziswe ukuhlalisa ezinye ezi-2 kwisofa kwigumbi lokuhlala.
4.96 · Izimvo eziyi-161
Eli khaya kulula ukuhamba umgama ukuya emlanjeni, kwiindawo zokutyela, nakwithiyetha. Ijikelezwe ngamakhaya amakhulu aseStratford. Indawo entle ngokwenene.
Umbuki zindwendwe ngu- Janelle
Sikufutshane ngayo nantoni na oyifunayo kodwa siya kukunika ubumfihlo ukuze ukonwabele ukuhlala kwakho eStratford.